‘एनएमए राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन’ किन गरिँदैछ? मुख्य विषय के–के छन्? डा कार्कीसँग भिडियो वार्ता :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
‘एनएमए राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन’ किन गरिँदैछ? मुख्य विषय के–के छन्? डा कार्कीसँग भिडियो वार्ता
रिता लम्साल बिहीबार, असोज ७, २०७८, १८:३१:००
काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले असोज ९ गते ‘एनएमए राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन’ गर्दैछ। 'पेन्डामिक प्रिपेडनेस इन नेपाल' नामक सन्देश सहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको अन्तिम तयारी पुरा भइसकेको संघले जनाएको छ।
संघीयतामा महामारीको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनको अवस्था, महामारीमा जनशक्ति तथा सेवा प्रवाहको अवस्था, कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रममा सरकारको रणनीति, महामारीमा बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया अवसर, चुनौती र महामारीबाट सिक्नुपर्ने पाठ, महामारीको पूर्वतयारीमा आउने नयाँ अवसर लगायत मुख्य ५ विषयवस्तुमा आधारित छन्।
सम्मेलनमा विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरी निस्कने निचोडलाई कार्यपत्र बनाइ सरकारलाई सुझावको रुपमा पेस गर्ने संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले बताए।
चिकित्सक संघले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको आयोजना किन गर्दैछ? सम्मेलन कसरी आयोजना गरिँदैछ? सम्मेलनका मुख्य विषयवस्तु के के छन्? संघले गर्ने सम्मेलन राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गर्ने स्वास्थ्य सम्मेलन भन्दा के फरक छ? लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी: